Linux Grub (Ini). Chii icho uye mashandiro ayo? | Linux Vakapindwa muropa
El GRUB ndechimwe chezvikamu zvakakosha zve Linux, asi inogona zvakare kuve imwe yezvinonetsa kwazvo, saka ticha tsanangura zvazvinosanganisira uye kuti zvinoshanda sei kubva pakuona kuri nyore.
Chikamu chekutanga che hard drive chinonzi iyo Master Boot Rekodhi (MBR). Ichi chikamu chinongori 512 mabheti chete uye chine chidimbu chidiki chekodhi (446 byte) inonzi iyo yekutanga bootloader uye tafura yekuparadzanisa (64 byte), iyo inotsanangura iyo yekutanga uye yakawedzerwa zvikamu.
Nokusingaperi, iyo MBR kodhi inotarisa iyo partition yakaratidzirwa seinoshanda uye kana chikamu chacho chawanikwa, chinochitakura kubva kubhoot chikamu chichienda mundangariro uye chinopfuura kutonga kwachiri. GRUB inotsiva default MBR nekodhi yako.
Basa reGRUB rinogona kuiswa muzvikamu zvinoverengeka.
1 nhanho Inowanikwa muMBR uye inonongedza zvakanyanya kusvika padanho rechipiri, sezvo MBR iri diki kwazvo kuti igone kubata data rese rinodiwa.
2 nhanho Anonongedza kune yako yekumisikidza faira, iyo iine zvese zvakaomarara mushandisi interface uye sarudzo idzo dzinowanzozivikanwa kana uchitaura nezve GRUB. Stage 2 inogona kuwanikwa chero kupi pane diski. Kana nhanho yechipiri isingakwanise kuwana tafura yayo yekumisikidza, GRUB ichasiya kuteedzana kwebhoti uye ndokupa mushandisi netambo yekuraira yekumisikidza manyore.
1.5 nhanho Unogona shandisa bhutsu ruzivo, idiki diki zvakakwana kuti ikwane munzvimbo ipapo mushure meMBR.
Iyo dhizaini yedanho inobvumira GRUB ive yakaoma kunzwisisa uye inogadzirisika, zvichienzaniswa nevakawanda bootloaders, ayo mashoma uye akareruka kukwana mukati memiganhu yetafura yekuparadzanisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Linux Grub (Ini). Chii icho uye mashandiro ayo?